Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Garashada & Garaadka Madaxda ONLF Ayaa Waxwayn Kabedali Doona Siyaasadda Geeska Afrika- By: Xaaji M/rashiid
Maqaal: Garashada & Garaadka Madaxda ONLF Ayaa Waxwayn Kabedali Doona Siyaasadda Geeska Afrika- By: Xaaji M/rashiid
Maanta waxaan doonayaa inaan maqaal kooban ka qoro madaxda iyo maamulka suuban ee hormuudka u ah halganka dalka iyo dadka Soomaalida Ogadenya lagu xoreynayo. Marka hore waxaan hawada u marinayaa salaan qaali ah oo u qalanta madax halgameed la maamuusayo. Marka labaad waxaan doorbiday inay dadwaynuhu ila wadaagaan qoraalkan kooban een ku xusayo madaxda jabhadda ee isu taagay inay dadkooda ka dulqaadaan reeryada guumaystahaha madow ee mudada dheer dulsaarneyd.
Sidaad la socotaan jidhka banii’aadamku waa wada muhiim wuuse sii kala mihiimsanyahay. Matalan aan soo qaato Madaxa, Lugaha iyo Gacmaha. Sadexdaa yaa ugu muhiimsan?? Lugo la’aan waad noolaan kartaa, Gacmo la’aana waad noolaan kartaa, laakiin Madax la’aan ma noolaan kartid! Waxaad sidaa ku fahantay xubinka ugu qaalisan jasadka ruuxa bani’aadamka ah inuu madaxa yahay.
Hadaba madaxa waxaan ka wadaa dadka madaxda ah, umad walbana waxaa ugu muhiimsan inay helaan masuuliyiin waxagarad ah. Waxaa la hayaa dalal badan oo markay madax wanaagasan waayeen iska baa ba’ay, ama bilaa karaamo umadadoodii dhaxalsiiyay! waxaa karaamo iyo sharafba haysta oo cadowgooda indha faraha ka galiyay madaxda ururwaynha ONLF. Waxay kala yaqaanaan cadowgooda iyo naasixooda, sidaas darteed wixii bahdil siyaasadeed ama mid shaqsiyadeed u keenaya way ka fogaadaan, sandareerada guumaystuhu la ordayana hangool dheer ayay iskaga qabtaan.
Madaxda ONLF intay halganka ku jireen waxay guumaystaha kala kulmeen hagardaamooyin aad u culus, kadib markuu cadowgu ogaaday inay yihiin madax doonaysa wax rasmi ah oo la taaban karo, taasoo ku salysan aayo katashi. Arintaasi waa mida cadowga ku kaliftay inuu dabinno uqoolo madaxda jabhadda. Laba eedood ayuu gumaystuhu u haystaa madaxda Ururka ONLF, tan hore waa maxaad xornimo u raadinaysaan!? Tan labaad waa maxaad soomaaliwayn u toosinaysaan!? Labadaa arimood markay ka tanaasuli waayeen xaaladu meeshaad aragtaan ayay mareysaa.
Hadaan tusaale ahaan usoo qaato madaxda soomaaliwayn anigoo codsanaya inay saxaafadda iyo akhristayaashuba iga raali ahaadaan mar hadii waxaan sheegi doono uu dhab yahay. Cidna ma saari doono danbi ayna lahayn. Madaxda Soomaaaliwayn haday yihiin kuwa ugu sareeya ama kuwa Gobolada maamula waa dad hungurigooda uun ka fakaraya oo ku mashquulsan inay lacago kala xisaabiyaan, Waxay ku mashquulsanyihiin dhoof iyo Tigidho. Waa kuwo dadka oo nool ka iibsada cadowga soomaaliyeed. Waxayba hada bilaabeen inay iyaga dhexdoodu guryaha isugu dhacaan oy is ugaadh sadaan. Bal balaayada iyo baaska la arkay maynaba aadin xagaa iyo cadowgoodii ee way soo guryo noqdeen! Dalkii soomaaliya ee ka koobnaa Badda, Barriga iyo Cirka meel bay iska dhigeen, markii laga reebo xogaa maaweelo ah oy umadda ku seexiyaan!
Markaan la hadlayo madaxda ONLF waxaan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin bal dib u milicsada cudurada faraha badan ee Rabi idinka badbaadiyay, waxaase munaasib ah in hadii ilaahay Talo iyo Towfiiq wanaagasan ku siiyo laga shukri naqo. Mudanayaal iyo marwooyin waxaa sabankan la arkay cudurro siyaasadeed oo halis ah oo Geeska Afrika wareegaya waxaana ugu waawayn sagaalkan cudur ee hoos ku xusan, ilaahayna ka badbaadiyay madaxda ONLF.
Cudurka koobaad, ee madaxda dila waa markuu wax walba naftiisa kahor mariyo.
Cudurka labaad, waa markuu qabyaalada ka dhigto dhaqan iyo dhaqaale.
Cudurka sadexaad, waa markuu Qadiyadiisa ka tanaasulu.
Cudurka afraad, waa markuu ujeedsado raaxaysi iyo naftiisa raali galinteeda.
Cudurka shanaad, waa markay kuyaraato inuu dadkiisa u naxariisto.
Cudurka lixaad, waa markay cabsi ku habsato.
Cudurka todobaad waa markuu kala garan waayo cadowgiisa iyo naasixiisa.
Cudurka sideedaad, waa beenta oo uu kaalmaysto.
Cudurka sagaalaad, waa hamiga gaaban een geedkan dhaafsiisnayn.
Mudamnayaal iyo marwooyin Cudurradaas aan soo sheegay oo dhan waxay halis ku yihiin mustaqbalka umad la guumaysto. Cudurada macaanka, dhiig,karka iyo wixii lamid ah ayaa ka shalan cuduradaas. Si kastaba ha ahaatee madaxda ONLF oo waxbadan fagaarayaal kaga khudbadeeyay inay goobayaan Jamhuriyad gaaar u taagan oo soomaalida Ogadenya ay leeyihiin ayaa la odhan karaa, waxay tunka saarteen xil wayn oo laga sugayo.
Wuxuu guumaystuhu Geed dheer iyo mid gaabanba ufuulay inuu hor istaago halganka shacbiga ah ee umadda soomaalida ogadenya, waxaase ka horyimid go’aan bir ah oo uu kala kulmay madaxda jabhadda. Waxaa kamid ah guulaha la taaban karo ee ay soo hooyeen madaxda ONLF, inay badbaadiyeen Quluubtii umadda oo xor ah, Waxaana halkaa ku burburtay Riyadii Woyaanaha ee aheyd inay umadeena ka dhigaan wada Shayaadiin iyo Shaalaqayaal!
Ugu danbayn waxaan utabin lahaa madaxda sharafta leh- haday sii xoojiyaan adeegsiga garashadooda iyo garaaadkooda ilaahayna talo saartaan, waxay waxwayn ka bedali doonaan siyaasadaha gurracan ee Geeska Afrika kajira.
MINTID, MIDNIMO, ISKU TASHI, GUUL IYO ALLAAHU AKBAR….